Nhau - Chii chesimbi artwork
Chii chesimbi artwork
Iyo yesimbi artikora inoita basa risingapindiki mukugadzira nzvimbo nekushongedza. Chishongo chesimbi chifananidzo chinogona kuiswa kunze nzvimbo yeruzhinji kana nzvimbo dzemukati, uye zvakare chinogona kushandiswa mune yechinyakare chiitiko.
Isu tinoziva zvidhori zvesimbi zvinosanganisira mamwe marudzi akadai seyakagadzirwa nesimbi isina tsvina, chifananidzo chendarira, chifananidzo chebronze, corten simbi yekuveza nezvimwe .. Mari yekugadzira haina kusiyana nekuda kwezvinhu zvakagadzirwa. Mumakore achangopfuura, simbi isina tsvina yakave ichishandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakadai sekuumbwa kwemahara, hotera, kirabhu, hofisi, imba, nzvimbo yekutengesa, nzvimbo yekugara, villas, gungwa, nzvimbo yekutandarira nezvimwe. Kufananidzwa nefaidha yegirazi, zvidhori zvakagadzirwa nemaoko zvine hunyanzvi hwekuita, izvo zvinonyanya kukodzera dhizaini yemazuva ano. Kune zvimwe zvakanaka, semuenzaniso ichave iine hupenyu hwakareba, zviri nyore kutakura, kuisa, kuchengetedza, nezvimwe.
PIEDRA (XIAMEN) RUDO rwe CO,. ndiyo nyanzvi yeChina inogadzira Sculptures. Iyo kambani yakagadzira zvifananidzo zvakawanda kumba nekukunze, uye yakawana mukurumbira wakanaka kubva kune vatengi vedu. Isu tinopa marudzi ese ezvigadzirwa zvesimbi zvidhori, zvinopfuura zvigadzirwa mazana mashanu pasarudzo yako. Tinogamuchira noushamwari kubvunza kwako kana uchiifarira.
Muna 2008, takanga tagadzira hombodo huru yependi yekupenda simbi yeIndonesia, iyo yakaiswa muzvitoro mall yekutengesa art. Iro locomotive chifananidzo chakagadzirwa neiyo yakakura 316L simbi isina chinhu, iyo inopendwa mune nhema dema uye goridhe ruvara zvichienderana nesarudzo yemutengi. Uye iyo loco chifananidzo chiri ne 10.4m kureba * 2.3m yakafara * 3.5m kureba, kutora anenge 3months kupedzisa. Uye pakupedzisira kuendesa kune mutengi ruoko zvakachengeteka, uye awana yakakwira midhiya kubva kune mutengi. Zvatakavimbisa kupa chimiro chakanaka kune wese mutengi, uye ivo vese vedu mutengi weVIP kana vakaisa kodhi yekuraira kwatiri.
Nzira yekubata: Unogona kutibata nesu nekutevera nzira yekumwe kubvunza kana uchifarira.
Mutengesi: Ms Cathy
Tele: + 0086-13950110440,+86 592 5970572
Chii Anwendung: 0086-13950110440
Facebook: 0086-13950110440 (kana cathy chifananidzo)
Isu Chat: 0086-13950110440
Yakabatanidzwa Muna: Cathy chivezwa
Nguva yekutumira: Jul-07-2020